om development bank(om development bank) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
ओम डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जर प्रक्रियालाई अन्तिम स्वीकृति दिन एनएमबी बैंकले डाक्यो विशेष साधारणसभा
काठमाण्डौ । ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडसँग मर्जर प्रक्रियालाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्न एनएमबी बैंक लिमिटेडले साउन २८ गते विशेष साधारणसभा डाकेको छ । विशेष साधारणसभामा विशेष प्रस्तावका रुपमा पेस हुने एनएमबी बैंक लिमिटेड र ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड आपसमा गाभ्ने÷गाभिने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिका तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन...
एनएमबी-ओम मर्जरमा खटपट: घोषित बोनस खारेज, डिडिएमा खेल !
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकबीच जारी मर्जर प्रक्रियामा खटपट सुरु भएको छ । एनएमबी बैंकले ‘भद्र सहमति’ विपरीत घोषित बोनस सेयर बाँड्न रोकेपछि र डिडिएमा समेत चलखेल गरेको भन्दै ओमका लगानीकर्ता बिच्किएका हुन् । यी दुई बैंकबीच जारी मर्जर प्रक्रियाको क्रममा डिडिए रिपोर्ट आइसकेको छ । डिडिएको क्रममा ओम डेभलपमेन्ट...
एनएमबी र ओम बैंकबीचको मर्जर छोटो समयमै सकिने, भदौ १ देखि एकीकृत कारोबार
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकले आगामी भदौ १ गतेदेखि एकीकृत बित्तीय कारोबार थाल्ने भएका छन् । यी दुई बैंकबीच निकै छोटो समयमै मर्जर प्रक्रिया टुङ्गिने भएको हो । यी दुई बैंकको मर्जर सम्झौताको क्रममा २ महिनाभित्रै मर्जर प्रक्रिया सक्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, मर्जर सकिएर एकीकृत कारोबार गर्दासम्मको अवधिमा ३ महिना समय...
राष्ट्र बैंकद्वारा एनएमबी र ओम डेभलपमेन्टलाई मर्जरमा जान सैद्धान्तिक स्वीकृति
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एनएमबी बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्जरमा जान सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले आइतबार दुवै बैंकलाई मर्जरमा जान सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको हो । दुवै बैंकले राजधानीमा आयोजित एक समारोहबीच गत जेठ २ गते मर्जर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । प्राइम कमर्सियल...
लगानीकर्तामाथि ओम बैंकको धोकाधडी, १२.७०% बोनस सेयर खारेज
काठमाण्डौ । दश महिनासम्म सेयर कारोबार रोक्का गरी लगानीकर्तालाई सकसमा पारेको ओम डेभलपमेन्ट बैंकले फेरि सेयरधनीलाई धोका दिएको छ । आफ्नै पूर्व घोषणाबाट पछि हट्दै यो बैंकले एनएमबी बैंकसँगको मर्जरलाई कारणको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट वितरण गर्ने भनी घोषणा गरी राष्ट्रबैंक पुगिसकेको १२.७० प्रतिशत बोनस सेयर खारेजीको...
ओम बैंकका अध्यक्षले सेयरधनीसँग माफी माग्दै भने–‘हामीले नियतवश यो गल्ती गरेका होइनौं !’
काठमाण्डौ । ओम डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष सुशीलकुमार घोषालीले लामो समयसम्म मर्जमा अलमलिने बाध्यताले सेयरधनीको सम्पत्ति बन्धक भएको भन्दै आफूहरुलाई माफी गरिदिन अनुनय गरेका छन् । यो बैंकले गत भदौ ३ गते प्राइम कमर्सियल बैंकसँग मर्जर सम्झौता गरेको थियो । मर्जर सम्झौताका कारण सोही बेलादेखि बैंकको दोश्रो बजार कारोबार रोक्का छ । प्राइमसँग...
एनएमबी र ओमबीच यसरी भयो मर्जर सम्झौता(भिडियोसहित)
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जर सम्झौता भएको छ । दुवै बैंकले बिहीबार दिउँसो राजधानीको एक होटलमा आयोजित समारोहका बीच मर्जर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । एनएमबी र ओम बैंक ८० : १०० को सेयर स्वाप अनुपातमा मर्ज हुन लागेका हुन् । यो आन्तरिक सहमति औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भने गरिएको छैन । डिडिए रिपोर्टबाट ८०ः१०० को...
एनएमबी–ओम मर्जर: सेयर स्वाप अनुपातमा यस्तो बनेछ समझदारी !
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकबीच बिहीबार मर्जरमा जाने समझदारी हुँदैछ । दुवै बैंकले काठमाण्डौको एक होटलमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आह्वान गरेका छन् । दिउँसो ३ः३० बजेबाट सो कार्यक्रम हुने बताइएको छ । मर्जरका लागि समझदारीपत्रमै हस्ताक्षर गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका दुवै बैंकबीचका महत्वपूर्ण समझदारीका केही बुँदा...
BREAKING : एनएमबी बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई अक्वायर गर्ने, बिहीबार समझदारी हुँदै
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंकसँग कुरा नमिलेपछि एक्वीजिसन प्रक्रियाबाट पछाडि हटेको ओम डेभलपमेन्ट बैंक एनएमबी बैंकसँग बिलय हुने भएको छ । एनएमबी बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकबीच प्राप्ति(मर्जर)को बिषयमा मोटामोटी सहमति भइसकेको ओमस्थित उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । एनएमबीले ओमलाई गाभ्ने बिषयमा औपचारिक समझदारी भोलि(बिहीबार) हुँदैछ ।...
प्राइम र ओमबीचको मर्जरमा औपचारिक पूर्णविराम, के कारबाही भयो ?
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले प्राइम कमर्सियल बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वायर गर्नका लागि जारी प्रक्रिया रद्ध(डिमर्ज) गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल राष्ट्रबैंकको सोमबार बसेको संचालक समिति बैठकले दुई बैंकबीच जारी एक्वीजिसन(मर्जर) प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने निश्कर्षसहित डिमर्जको निर्णय गरिएको हो। केन्द्रीय बैंकको यो...
खूद नाफामा १०९.६४% को छलाङ मार्दा समेत किसान माइक्रोको इपीएस किन घट्यो ?
काठमाण्डौ । किसान माइक्रोफाइनान्सले खूद नाफा १०९.६४ प्रतिशतले वृद्धि गरेको त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। यो अवधिमा चुक्तापूँजी १२४.४९ प्रतिशतले बढेका कारण वार्षिकीकृत प्रतिसेयर आम्दानी भने ६.६२ प्रतिशतले घटेर १९.७१ रुपैयाँमा सीमित बन्न पुगेको छ । किसानले अधिकांश सूचकमा राम्रो प्रगति गरेको देखिएको छ । चालु आर्थिक...
मानव सेवा आश्रमलाई ओम बैंकको सहयोग
रुपन्देही । ओम डेभलपमेन्ट बैकले बुटवल स्थित मानव सेवा आश्रमलाई टेलिभिजन सहयोग गरेको छ । बुटवल शाखाको दोश्रो बार्षिकोत्सवका अवसरमा यस क्षेत्रकै अग्रणी आश्रमलाई सहयोगापेक्षीहरुले मनोरञ्जनात्मक र हासी खुशि जीवन यापन गर्न सकुन भन्ने उद्धेश्यले ५५ इञ्चको टेलिभिजन सहयोग गरेको हो । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर...
प्राइम र ओमलाई कारबाही गर्ने राष्ट्रबैंकको तयारी, मर्ज लगभग असफल !
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंक डिमर्जमा जाने लगभग निश्चित देखिएको छ । रातारात कुनै चमात्कार भएन भने यी दुई संस्थाबीच करिब साढे ८ महिनादेखि जारी एक्वीजिसनको प्रक्रिया टुंगिनेछ । यी दुई बैंक अन्तिम अवस्थामा समेत आपसमा मिल्न नसकेपछि नियामक नेपाल राष्ट्रबैंक पनि दुवै बैंकलाई कारबाही गर्ने र जारी मर्जरलाई...
लन्डन(रासस/एएफपी) । ब्रेन्ट नर्थ सीको कच्चा तेलको मूल्य बिहीबार प्रति ब्यारेल ७५ अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ । यो विगत छ महिनाकै उच्च हो । संयुक्तराज्य अमेरिकाले इरानी तेलमाथिको प्रतिबन्धलाई थप कडाई गरेसँगै तेलको मूल्यमा बृद्धि भएको हो । जुन महिनाका लागि प्रति ब्यारेल ७५.३५ अमेरिकी डलरको अर्डर छ जुन बुधबारको भन्दा ७८ सेन्ट बढी हो...
पोखराका सवारी साधनमा लागू स्मार्ट यात्रा कार्ड ओम बैंकले जारी गर्ने
काठमाण्डौ । ओम डेभलपमेन्ट बैंक तथा एनक्लाउड प्रा.लि.बीच एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिश्वमोहन अधिकारी तथा एनक्लाउड प्रा.लि का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्रनारायण श्रेष्ठले स्थानीय शृङगा यातायात र पोखरा बस व्यबसायी समितिका अधिकारीहरुको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्...
मकवानपुरको पालुङ बजारमा सिन्धु विकास बैंकको शाखा विस्तार
नागरिक लगानी कोषको वार्षिक साधारणसभा भदौ ३० गते, २३.१६% लाभांश प्रस्ताव पारित गर्ने
तयार भयो प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने 'रोबोटिक रुख', दैनिक ३ हजार मानिसलाई शुद्ध हावा
‘ऋण गरेर सेयरमा लगानी नगर्नू, मजस्तै डूब्नुहुन्छ’
अक्षय कुमार विश्वकै चौथो बढी आम्दानी गर्ने अभिनेता